မုံရွာမြို့တွင် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ၃၁ နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားကျင်းပ - Yangon Media Group
မုံရွာ၊ ဩဂုတ် ၈- စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး မုံရွာမြို့တွင် ရှစ်လေး လုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး စတင်စုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ရာ နေရာတစ် ခုဖြစ်သော သမိုင်းဝင် ရွှေစည်းခုံ ဘုရား ထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော် ကြီးရှေ့တွင် ရှစ်လေးလုံးအရေး တော်ပုံ ၃၁ နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ ဖွယ်အခမ်းအနားကို ဩဂုတ် ၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနားတွင် ရှစ်လေး လုံးကာလ၌ ကျဆုံးခဲ့ကြသော ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူပြည်သူများအား ဆုတောင်းအ မျှဝေခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာသူ များထဲမှ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော် ပုံကာလအတွင်း ゞင်းတို့ပါဝင်ခဲ့ သည့်အကြောင်းများကို နောက် လူငယ်များသိစေရန် မျှဝေပြော ကြားခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
]]၈၈ တုန်းက ကျွန်တော်က ၁၀ တန်းကျောင်းသားပါ။ ရန်ကုန် မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ဖိနှိပ်ခံရတာ၊ ဖမ်းခံရတာ၊ ကျဆုံး သွားတာစတဲ့ နောင်တော်ကျောင်း သားကြီးတွေ ခံစားနေရတာကိုကျွန် တော်တို့ စတိတ်ကျောင်းသားတွေ ကလည်း မခံစားနိုင်ဘူး။ ပထမ ဆုံးကျောင်းတွင်း ဆန္ဒပြပွဲစတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဝိဇ္ဇာတန်းအားလုံး က မိဘတွေ လက်မှတ်ထိုးရတယ်။ အစိုးရဖိနှိပ်ရင် တော်လှန်ရမယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိတယ်။ အဲဒီကစတယ်}}ဟု မုံရွာမြို့ခံ ကိုသန့် စင်ကပြောသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၈ ရက် က မုံရွာမြို့ စတိတ်သရီးကျောင်း မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၃၀ ကျော်သည် ရွှေစည်းခုံဘုရား ထိုင် တော်မူရုပ်ပွားတော်ရှေ့မှတစ် ဆင့် မုံရွာမြို့တွင်းသို့ ခွပ်ဒေါင်းအလံ လွှင့်ချီတက်ပြီး အခြားသောဆန္ဒပြ အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြ ကြောင်း ထိုစဉ်ကပါဝင်ခဲ့သူများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
မြောင်းမြမြို့တွင် လွပ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ်တုနှင့် ရင်ပြင်တည်ဆော?
အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်နှစ်ခု၏ အဖွဲ့ဝင် အလုပ်သမားဦးရေ ၁၅ဝဝ ခန့် အလုပ်?
မြဝတီ ပြန်လည်ကြိုဆိုရေး စခန်းသို့ မြန်မာ အလုပ်သမားများနှင့်အတူ ဘင်္ဂါလီနှစ်ဦး ရောနှော ဝင်ေ??